JTBC – Networks – Alpha Premium
Private Lives နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် လူလိမ်တွေအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ Girls’ Generation က Seohyun ကဘအဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် မင်းသားတော့ Cross/Strongest Deliveryman တို့ထဲက မင်သား Ko Gyung-Pyo ပါ စစ်မှုထမ်းပြီးလို့ ပြန်လာပြီးချင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးပါနော် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း အီဂျောင်ဟွမ်ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုက အဖွဲ့မှူးတစ်ယောက်ပါ သာမန် အလုပ်သမားလို့ထင်ရပေမယ့် အရမ်းလျှို့ဝှက်တတ်သူပါ ချာဂျူအွန်းကတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မျက်နှာ အပြစ်ကင်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လူလိမ်မလေးတစ်ယောက်ပါ သူမကတော့ ပြစ်မှုအထင်ရှား ရှိခဲ့တာကြောင့် ထောင်ကျသွားခဲ့ပါတယ် ဂျောင်ဘို့ဂီကတော့ အရမ်းလည်တဲ့ လူလိမ်ဖြစ်ပြီး အခြားလူလိမ်တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ပြန်လိမ်တာပါ သူမမှာ ဂင်ဂျယ်အုဆိုတဲ့ ပါတနာတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ် တစ်နေ့ ဒီလူလိမ်တွေက နိုင်ငံ ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိသွားပြီး ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတော့တယ် နောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ အလိမ်ပေါ်မလားဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါနော်…
More Than Friends More Than Friends(2020)အညွှန်း ********************************** အပိုင်းသစ်(၁ မှ ၁၆)ထိ စ/ဆုံး “ချစ်သူကိုတောင် ချစ်တယ်လို့ မပြောရဲတဲ့ကောင်…… ရာစုတစ်ထောင်နေရစ်ခဲ့…. ထိုသို့ဖြင့် စကားမဲ့စေသတည်း” ဒီကဗျာလေးက ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ မီးတောက်ရစ်သမ် ကဗျာထဲက တစ်ပိုဒ် ဖြစ်ပါတယ်….စကားတွေမဲ့စေခဲ့တာ ဘာ့ကြောင့်များလဲ… ဘာလို့ဖွင့်မပြောရဲတာလဲ… နောက်ဆုံး ရာစုတစ်ထောင်နေရစ်ခဲ့တဲ့..ဆွေးမြေ့စရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်….ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာ တကယ်တော့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကြား အချစ် ပေါက်ဖွားလာတဲ့အချိန်မှာ မသင့်တော့ဘူးလို့ ထင်လို့ ထိန်းချုပ်ခဲ့တာတွေ….ကိုယ့်အပေါ်ရိုးသားမှုကို အခွင့်အရေးယူသလိုဖြစ်မှာစိုးတာတွေရယ် လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ ခင်မင်မှုတွေကို ပျောက်ကွယ်သွားမှာစိုးတာရယ်နဲ့ Friend Zone ထဲမှာ တိတ်တိတ်လေးစကားမဲ့နေတဲ့သူတွေပေါ့… ဒီကိုးရီးယားစီးရီးလေးက အပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီး ကျောင်းသားဘဝလေးတွေနဲ့ လှလှပပ ပုံဖော်ထားတယ်…. ကြည်နူးဆွတ်ပျံဖွယ်ရာကောင်းတဲ့စီးရီးလေးမို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းသတင်းကောင်းပါးပါရစေ…
18 Again 18 Again (2020) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း ********************************* ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အတော်များများ လက်ရှိအဖြစ်အပျက်အပျက်ကို စိတ်ကုန်နေတတ်သလို ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးနေရာကို အဆင်မပြေမှုတွေကြုံလာတိုင်း စိတ်ကူးနဲ့ပြန်သွားလေ့ရှိတယ်… တကယ့်လို အဲဒီအချိန်မှာများတစ်ခြားဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခွင့်ရရင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပဲလို့ တွေးတတ်ကြတယ်… အိမ်ထောင်ရေးမှာအဆင်မပြေလှတဲ့ လင်မယား(၂)ယောက်မှာ ယောကျ်ားဖြစ်သူဟာ အပေါ်ကပြောထားသလို ပြန်တွေးနေလေ့ရှိတယ်… လက်ရှိဇနီးနဲ့ကွာရှင်းရမယ့်အနေအထားဖြစ်တဲ့အပြင် သားသမီး(၂)ယောက်နဲ့လည်းဆက်ဆံရေးက အတော်မကောင်းလှ…. လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အလဲလဲအပြိုပြို….ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့တော့ မမျှော်လင့်ဘဲ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့… ဒီစီးရီးက နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးကြီးတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားပြီး မိသားစုပြဿနာတွေ သားသမီးတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားသလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ငယ်ဘဝကျောင်းသား ပုံရိပ်တွေလည်းအများကြီးပါဝင်ပါတယ်… မပျင်းမရိနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းဖြစ်မှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါကုန်….
Was It Love? Was It Love?(2020)ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း ********************************** အပိုင်း(၁ မှ ၁၆) ထိ စ/ဆုံး Running Man ရဲ့ ace လေး Song Ji Hyo ရဲ့ drama series အသစ်လေးပါ … movie producer တစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Noh Ae Jung တစ်ယောက်ဟာ သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ Single mother ဘဝကိုအချိန်အတော်ကြာဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ…. ယောကျ်ားတွေကိုစိတ်ကုန်နေတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် အလုပ်နဲ့သမီးအတွက်ပဲ အချိန်ပြည့်ပေးရင် သူမရဲ့အချိန်ဇယားတွေကို ပြီးဆုံးစေတဲ့သူပါ….. ဒီလိုပဲဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားကတော့ အနည်းနဲ့အများတော့ ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲလို မာကျောနေတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ… ဒီလိုနှလုံးသားပိုင်ရှင်ကို အချစ်နတ်ဘုရားက ကြည့်မနေနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်… နူးညံပြီး ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံပြန်လည်မွေးဖွားဖို့ လှုပ်နုှိးပေးမဲ့ သူကိုလွှတ်လိုက်တယ်… ဒါပေမယ့် Noh Ae Jung တစ်ယောက်ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလားမသိ…သူမ ဘဝထဲကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ရင်ခုန်သံတွေမွေးဖွားပေးဖို့ဝင်လာတဲ့ ယောက်ျားလေးက (၄)ယောက်တောင်ပါပဲ…. ကိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဉီး….. ဒီစီးရီးက မင်းသမီး Song Ji-hyo တစ်ယောက်အတွက်အပိုင်နိုင်ဆုံး Character ပါပဲ… ရိုးသားတယ်…ဟာသလေးတွေကလည်း တစ်ကယ်ကို ရယ်ရတယ်….
The Good Detective The Good Detective (2020) အပိုင်း( ၁ မှ ၁၁) နှင့်အပိုင်းသစ်(၁၂) မှုခင်း ဒရာမာ ကြိုက်သူတွေ အတွက် ကိုရီးယားဒရာမာကောင်းကောင်း တစ်ကားတော့ လာပြန်ပါပြီ။ အဓိကဇာတ်ဆောင်မင်းသားတွေကတော့ Chocolate နဲ့ Encounter မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားချော ဂျန်ဆောင်းဂျို နဲ့ သဘာဝကျကျ သရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ မင်းသားကြီး ဆုန်ဟွန်ဂျူးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒီလိုပါ။ လုပ်သက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ စုံထောက်ကြီး ဂန်ဒိုချန်းက အမှုလိုက်ရာမှာ အတွေ့အကြုံ၊ အဆက်သွယ်နဲ့ နည်းပညာကို အသုံးချပါတယ်။ လုပ်သက် ၉ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ စုံထောက် အိုဂျီဟော့ ကတော့ ဦးလေးဆုံးပါးပြီး အမွေတွေ ရရှိထားတဲ့ လူကုံထံစုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အမှုလိုက်ရာမှာ ရရှိထားတဲ့ သက်သေတွေကို အသုံးချပြီး တရားခံရဲ့ စိတ်ကို ခန့်မှန်းပြီး အမှုလိုက်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်က ရရှိထားတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ဖြစ်ပျက်သမျှ ကိစ္စတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ရင်ဖွင့်လေ့ မရှိပါဘူး။ မင်းသမီးကတော့ ...
Sweet Munchies (12ပိုင္း)စ/ဆံုး ညည့်နက်မှာ ဗိုက်ဆာတတ်တဲ့ သူမျိုး တွေ အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ စားဖိုမှုး ကိုကိုနဲ့ PD မမ ရဲ့ အစားတစ်လိုင်း လေး များ ကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဟာသပုံစံ ကိုရီးယား Dramaပါ။ Park Jin Sung (Jung Il-Woo) ကစားဖိုမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ညည့်နက်ထိဖွင့်တဲ့ နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ သူ့ဆိုင်ရဲ့ဝှက်ဖဲက စားသုံးသူတွေက ကြိုက်နှစ်သက်ရာသောက်စရာတစ်ခုခုကိုသာရွေးချယ်နိုင်ပြီး သောက်စရာနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အစားအစာများကိုတော့ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် Park ကရွေးချယ်ပေးပါတာ က ဒီဆိုင်ရဲ့ ထူးခြားပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ Kim Ah Jin (Kang Ji-Young ) ကစိတ်အားထက်သန်သော PD တစ်ယောက်၊ Ah Jin က အမြဲ မျက်နှာရွှင်ရွှင်နဲ့ နေတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အားသာချက်ကတော့ အစားအစာနှင့်အရက်သောက်တာကို Crazy တစ်ယောက်ပါတဲ့။ အစားတစ်လိုင်းကော အသောက်တစ်လိုင်းကော ဖြစ်တဲ့ ...
Mystic Pop-up Bar ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ထူးခြားဆန်းကြယ်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေး တစ်ကားဖြစ်တဲ့ “Mystic Pop-up Bar” လို့အမည်ရတဲ့ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးအုန်းမယ်နော် (She Was Pretty)(Kill Me:Heal Me)စတဲ့တခြားဇာတ်ကားတွေအများကြီးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသမီး Hwang Jung Eum နဲ့ (Goblin)ထဲမှာ ယူဒေါ့ဟွာဆိုပြီး လူသိများခဲ့တဲ့ မင်းသား Yook Sung Jae တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Wol Joo(Hwang Jung Eum) ဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ အစားအစာဘားလှည်းလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ အရင်ဘဝကသူ့ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ဘားလှည်းကိုလာရောက်တဲ့ ဧည့်သည် ၁၀၀,၀၀၀ ရဲ့ပြဿနာတွေကိုနားထောင်ပေးပြီး သူတိုရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဘားလှည်းလေးကိုလာလည်တဲ့ဖောက်သည်တွေထဲမှာ သက်ရှိလူသားတွေတင်မကဘဲ သေပြီးသားလူများလည်းပါဝင်ပါတယ်။Han Kang Bae(Yook Sung Jae)ကတော့ GapEul စူပါမားကတ်က ဧည့်သည်အကြံပေးစင်တာမှာ လုပ်ကိုင်နေပြီး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဘားလေးရဲ့ ဖောက်သည်တစ်ဉီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။အဲ့ဒီဘားမှာလည်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်းပြဿနာတွေဖြေရှင်းရာမှာ ကူညီပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ “Mystic Pop-up Bar"လေးကနာမည်ကြီး Webtoon တစ်ခုအပေါ်အခြေခံပြီး ...
Chief of Staff Season 1+2 Chief of Staff Season 1 = 10ပိုင္း Chief of Staff Season2= 10ပိုင္း ဒီpolitical dramaမင္းသားမင္းသမီးကေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့ Along with the god တို႔ Triple တို႔ထဲက မင္းသားႀကီး Lee Jung Jae နဲ႔ Oh My Venus တုိ႔ My Girlfriend is Gumiho စတဲ့ ဇာတ္ကားေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ Shin Min-A တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ ဂ်န္ထယ္ဂြ်န္က ကိုရီးယားရဲတကၠသိုလ္က ဘြဲ႕ရခဲ့ျပီး စံုေထာက္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္ သူက ပိုျပီး အာဏာရခ်င္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီးေနာက္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆုန္းဟီေဆာ့အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရတဲ့ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ သူက ထက္ျမက္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေအးေအးေဆးေဆးခ်ႏိုင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါ အႏိုင္လိုခ်င္စိတ္လဲ ျပင္းျပသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္ သူ႕မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုစားလွယ္ျဖစ္လာခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးလဲ ရွိေနပါတယ္ ဂန္ဆြန္ေယာင္းကလည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ပါတီရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ေယာက္ပါ သူကလည္းရည္မွန္းခ်က္ႀကီးျပီး သူ႕အလုပ္ေတြကို ေသခ်ာလုပ္တတ္သူပါ ဂန္ဆြန္ေယာင္းနဲ႔ ဂ်န္ထယ္ဂြ်န္တို႔ၾကားမွာ ကို႔ယို႔ကားယားႏိုင္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုလည္းရွိေနပါေသးတယ္ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ...
Chief of Staff Season 1+2
When the Weather is Fine When the Weather is Fine (2020)ဇာတ္လမ္းတြဲအညြွန္း ***************************************************** အပိုင်း(၁ မှ ၁၆)ထိ စ/ဆုံး (Unicode) ဟယ်ဝန်း (Park Min Young) ဟာစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…သူမဟာ ဂီတပိုင်းမှာ ပါရမီပါပေမယ့် ကလေးဘဝတုန်းက အခက်အခဲမျိုးစုံကြောင့် သူကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆယ်လိုတီးခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်.. နောက်ပိုင်း ဆိုးလ်မြို့ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ သူမရဲ့မွေးရပ်မြေကိုပြန်လာဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်…… အွန်ဆော့ (Seo Kang Joon) ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ဘွတ်ဟွန်းရွာမှာ ‘ကောင်းသောညချမ်းလေး စာအုပ်ဆိုင်’ ဆိုတဲ့စာအုပ်ဆိုင်အသေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်….. စာအုပ်ဖတ်ရင်း ဘလော့ဂ်လုပ်ရင်းနဲ့အချိန်တွေကို ရိုးရှင်းစွာ ကုန်ဆုံးစေတဲ့သူပေါ့… တစ်နေ့မှာတော့ အရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင် လောကဒဏ်တွေခံနေရပုံပေါ်တဲ့ ဟယ်ဝန်းနဲ့ရွာမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်…..အဲ့ဒီနောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး……ဒီစီးရီးက အပတ်စဥ် တနင်္လာနဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြီး ၁၆ ပိုင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်……ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသား Kang-Joon Seo က Are You Human Too? နဲ့ Splendid Politics စတဲ့စီးရီးနဲ့မြန်မာပရိတ်သတ်များရင်းနှီးခဲ့ပြီးမင်းသမီးချော Min-Young Park ကိုတော့ ထွေထွေထူးထူးမိတ်ဆက်စရာမလိုဘူးထင်ပါရဲ….What’s ...
The World of the Married IMDb Rating – 8.4/10 MyDramaList – 9/10 ထိရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ #Unicode တချို့တွေ့က ပြောတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာ အနုပညာ တဲ့။ အင်မတန်မှန်တဲ့ စကားရပ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာ အရမ်းကို နူးညံ့တယ်။ သိမ်မွေ့တယ်။ ပညာသားပါတယ်။ အိမ်ထောင် ထိန်းသိမ်းမှုအတတ်ပညာဆိုတာ အိမ်ထောင်သည် အိမ်ရှင်မတွေ မဖြစ်မနေ တတ်ကို တတ်သင့် တဲ့ ပညာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာတော့ မင်းသားနဲ့မင်းသမီး ဇာတ်ပေါင်းရင် Happy Ending ပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ . အိမ်ထောင်ရေး ခရီးကြမ်းကြီးက အဲဒီကျမှ စတာ။ ဒီတော့ကာဗျာ ….. အိမ်ထောင်သည်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ ကို တစ်ခေါက်လောက် အလည်သွားကြတာပေါ့။ လူပျို၊ အပျိုတွေ ဒီဇာတ်လမ်းကြည့်ပြီးလို့ အိမ်ထောင်မပြုချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားရင်တော့ ကျွန်တော့်တာဝန် မဟုတ်ဘူးနော့။ နောက်ပြီး ၁၈ ယောက် စုပြီးမှ ကြည့်ရမယ့် အခန်းတွေ ပါတော့ လူကြားသူကြားတော့ မကြည့်မိစေနဲ့နော် . . . ...